ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “နှစ်သက်မိသော သူ့အမြင်”
I DARE SAY "KO PAW ,YOU ARE 99.99"
Ko Paw, Rita, NLS.....we speak the same language. I admire you for being so candid on this very sensitive issue. I am looking forward to reading your next post concerning this metter. Thanks!!!!!
ရီတာကို တစ်ခုလောက် မေးချင်လို့ ဂျာနယ်ကျော် မမလေး ရဲ့ သူလိုလူ ကို မကြိက်တဲ့ အကြောင်း ခဏခဏ ပြောနေလို့ ဘာကြောင့် မကြိက်တယ် ဆိုတာကို သိချင် လို့ပါ?
ဖတ်ခဲ့တဲ့အချိန်ကနေ ခုထိ ကြိုက်တဲ့စိတ် ပေါ်မလာလို့ မကြိုက်တာပါ။
Another Annonymous :D said...
ဒါဆို မရွှေမိ ကိုကျေးဇူးတင်နေဖို့ မလိုဘူးထင်တယ်။ အဲဒီဘလော့ကိုသွားဖတ်ပြီးပါပြီ။ သူရေးတင်နေတာတွေတော်တော်များများက ဂျာနယ်ကျော်မမလေးနဲ့ ပတ်သတ်တာတွေချည်းပဲ။ သူလိုလူ လို ဂျာနယ်ကျော်မမလေးရဲ့ master piece လိုမျိုးကိုတော့ မကြိုက်ဖူးပြောပြေီး ဂျာနယ်ကျော်မမလေးအကြောင်းရိုက်တင်ပေးနေတဲ့သူကို ကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတော့ မရှင်းလို့ ပါ။ လွတ်လပ်စွာ ကြိုက်၊မကြိုက်ခွင့်၊ကျေးဇူးတင်၊ မတင်ခွင့်ရှိပါတယ်လေ။ :))
စာရေးသူ တစ်ယောက်ကို ကိုယ်ဘယ်လောက် ကြိုက်ကြိုက် စိတ်ဝင်စားစား သူ ရေးသမျှ စာအုပ်၊ အကြောင်းအရာမှန်သမျှကိုပါ ကြိုက်ရမယ်လို့ ဘယ်သူက သတ်မှတ်ထားလို့လဲ။
အားလုံးနီးပါးက ကြိုက်တဲ့ သူ့စာ တအုပ် မကြိုက်မိတာနဲ့ သူ့အကြောင်း စိတ်မဝင်စားရတော့ဘူး ဆိုတာကရော ဘယ်လို အတွေးအခေါ်နဲ့ ပြောလိုက်တာလဲ။
နောက် ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ စာရေးသူအကြောင်း စာအုပ်ကိုင်ပြီး ဖတ်ဖို့ မလွယ်ချိန်မှာ တကူးတက စာရိုက်တင်ပေးတဲ့ သူကို ကျေးဇူးတင်တာ ဘာများ မှားနေပါသလဲ။
အားလုံးနီးပါးက ကြိုက်ရင်၊ အားလုံးနီးပါးက master piece လို့ သတ်မှတ်ရင် မကြိုက်မနေရလား။ အဲလိုမှ အဲဒီစာတအုပ်ကို မကြိုက်မိရင် စာရေးသူအကြောင်းကိုလည်း ဘာမှ စိတ်ဝင်စားစရာ မလိုလား။
ဒေါ်ခင်မျိုးချစ်တောင် ဉာဏ်မမီဘူး ပြောရလောက်အောင် အတွေးအခေါ်မျိုးတွေ လာမလုပ်နဲ့နော်။
သူလိုလူ ကိုဘာကြောင့်မကြိုက်လဲ ဆိုတော့ -သူ့ယောက်ကျားအကြောင်း အနည်:ငယ် ပိုပိုသာသာရေးထားတယ် ခံစားရလို့ပါ (တဦးတည်:အမြင်ပါ)။ ငါ့မိန်းမ သိပ်တော်တယ်ကွာလို့ ယောက်ကျားလုပ်သူက လူပုံအလယ်မာ ချီးကျူးရင် (တကယ်ပင်တော်သော်ငြားလဲ) နားထောင်ရတဲ့သူက အီလယ်လယ်ဖြစ်သွားသလိုပါ။ ဒါဆို "Anonymous ကိုကိုကပ်သပ်" ကမေးပါလိမ့်မယ်၊ ဘယ်နေရာတွေများသူ့ယောက်ကျားတော်တာတွေပြောပါလိမ့်လို့၊ ဂျာနယ်ကျော် မမလေးက စာရေးကောင်းသူမို့ ကွက်၂ကွင်း၂ မသိသာပေမဲ့ တအုပ်လုံးဖတ်ပီးရင် အဲလိုခံစားရမှာပါ (ဖတ်ရော ပီးပြီလားဟင်?) ဂျာနယ်ကျော် မမလေးရဲ့ "သူမ" ဝတ္တုကိုအရမ်းကြိုက်ပါတယ်၊ ရီတာ ဖတ်ပီးပြီလား? မိန်:မငယ်လေး၁ယောက်ရဲ့ အိမ်တွင်းမှူနိုင်နင်းပုံ၊ ကြိုးစားပုံ၊ အကောင်းဆုံးက ဇတ်သိမ်:မှာ အလုပ်သင့်ဆုံးကို လုပ်ရဲပုံ (ကိုယ့်ကို ကြိုက်နေတဲ့ ၊ကိုယ်ကလဲကြိုက်တဲ့ ဝန်ကြီးတယောက်ကို မသင့်တော်လို့ လက်မခံလိုက်ပုံလေးက သွာ:မပါရင်နေ ကားပါရင်ပီးတာပဲဆိုတဲ့ မမလေးများ အတုယူစရာ)။ ဒီတော့ စာရေးသူ ၁ဦးတဲက ရေးတာဖြစ်သော်ငြားလဲ ကွဲပြားစွာ ကြိုက်ခွင့်မကြိုက်ခွင့်ရှိပါတယ်။ ("သူမ" ဝတ္တုကို သွားဖတ်ပီး ကောင်းနေရင် ကြိုက်ရင် ကိုယ့်ကို ကျေးဇူးတင်ဖို့မမေ့နဲ့နော် (အတင်း ကြီးပါလား))- Say Thank You! :P
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အလုပ်သမားကိုတောင်မှ ကျေးဇူးတင်လိုက်ပြီးကာမှ ကိုယ့်မိဘကျမှ ကိုယ်ပြန်တင်မနေနဲ့လို့ လာရိတဲ့လူဟာ ဘာဦးနှောက်နဲ့ တွေးပြီး ရိလိုက်တယ် ဆိုတာ လိုက်လို့ကို မမီတာပါ။
ခုပြောနေတာတွေက ကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်း ပြောနေတာလား၊ မတင်ကြနဲ့ ပြောနေတာလားဆိုတာ အရင် နားလည်အောင် ဖတ်ပါလို့လည်း မပြောချင်တော့ဘူး။
ရှင်းသထက်ရှင်းအောင် ပြောနေတာတောင်မှ ဒီလို လို့ ရေးထားတာကို ဟိုလို ဖြစ်အောင် ဖတ်နေတာ ကိုယ်လဲ မနိုင်တော့ဘူး။ ယူချင်သလိုသာ ယူကြပေတော့။
ရှင်ကျားပူရောက်ခါစက စာရင်းဘယ်တုန်းကမှ မမှတ်တဲ့ ဦးလေးအငယ်စီမှာ ပိုက်ပိုက်ချေးသုံးပါတယ်၊ သူကလဲ သူလိုရင်ပြန်ချေးပါတယ်၊ ကိုယ်က ကိုယ်ယူတာရော သူ့ပေးတာရော ရက်စွဲနဲ့ စာရင်းတွေလုပ်ထားတာ 3နှစ်ပီးလို့ သူပြန်မယ်လဲလုပ်ရော A4 ၄ရွက်လောက်ရပါတယ်၊ ဒါနဲ့ သူ့ကိုစာရင်းရှင်းမယ် ဆိုခေါ်ပီး တခုချင်းရှင်းပြပါတယ်၊ အရင်းစစ်တော့ သူက ကိုယ့်ကို ကိုးဆယ်လောက် ပြန်ပေးရမယ်လဲ ဆိုရော တချိန်လုံး စိတ်မပါစွာ ငြိမ်ပီး နားထောင်နေတဲ့ ဦးလေးက "နေစမ်:ပါဦး၊ နင်ကပေးရမာလား ငါကပေးရမာလား - ကဲ အစက ပြန်ပြောစမ်းဟာ" ဆိုပီး ရစ်ပါရော၊ စာရင်း မှားတယ်ထင်ရင် လေးလေး စာရင်းနဲ့တိုက်မယ် ဆိုတော့လဲ ပြစရာ မရှိပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် သူအများကြီး ကိုယ့်ကို ချေးထားဘူးတယ် ချည်းပြောနေပါတယ်၊ ဘယ်လောက်အများကြီးလဲ ဆိုတော့လဲ မပြောနိုင်ပါဘူး၊ ခုလဲ Anonymous ခမြာ ညီလင်းဆက်၊ ရီတာ၊ ကိုပေါတို့ (ကြိုးစားပမ်းစား) ရေးထားတာတွေမှ အားမနာ "အစကပြန်ပြောစမ်းဟာ" ဆိုသလို "မိဘတွေကိုလဲကျေးဇူးတင်မနေနဲ့" လို့ ကောက်လိုက်ပါတယ်၊ ဪ ဒုက္ခ ဒုက္ခ
ဘာကြောင့် အဲလို အဓိပ္ပါယ်ကောက်သလဲဆိုတာ သေချာပြောပြနိုင်ရင်ကောင်းမယ် (ငါ အများကြီး ချေးထားဘူးတယ် လို့တော့ အတင်းမငြင်းလောက်ဘူးထင်ပါရဲ့)
Rita: ကျွန်မ ဆိုလိုရင်းက "လုပ်စရာရှိတာ လုပ်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လုပ်ချင်တာကို လုပ်နေတာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကျေးဇူးခံ ကျေးဇူးစား ကျေးဇူးတရား ဆိုတာတွေ၊ အနစ်နာခံတယ်ဆိုတာတွေ မဆိုင်တာတွေ ထည့်ပြောနေရင် ပြောနေတဲ့ သူတွေဟာ စိတ်ကုန်စရာကြီး၊ ကျွန်မကတော့ အဲလိုလူမျိုးကို ရိုးသားတယ် မထင်တော့ဘူး။ မယုံကြည်ဘူး" လို့ ဆိုလိုချင်တာပါပဲ။
ဟုတ်ပြီလား၊ "ကိုယ့်ဝါသနာ ကိုယ့်ခံယူချက်နဲ့ ကိုယ်ကျိုးအတွက် လုပ်နေတာ ကျေးဇူးကို မျှော်လင့်မနေပါနဲ့" စာဖတ်သူက ဒီလို ရပါတယ်။
သိမ်းကြုံးပြော လို့ရလား၊ သူ့အကန့်နဲ့သူပါ
("ကိုယ့်ဝါသနာ ကိုယ့်ခံယူချက်နဲ့ ကိုယ်ကျိုးအတွက် လုပ်နေတာ ကျေးဇူးကို မျှော်လင့်မနေပါနဲ့" စာဖတ်သူက ဒီလို ရပါတယ်။
သိမ်းကြုံးပြော လို့ရလား၊ သူ့အကန့်နဲ့သူပါ)
မမျှော်နဲ့ မပြောပါ။ ကိုယ်သာဆိုရင် မမျှော်ဘူး လို့သာ ဆိုလိုပါသည်။
စာဖတ်သူအနေနဲ့ မျှော်ချင်ရင် မျှော်ပါ။ သဘောပါ။
တခုပဲ ရှိတယ်။ မျှော်ထားတဲ့ဟာကို ရချင်မှတော့ ရပါလိမ့်မည်။
တင်ချင်တဲ့လူက တင်ချင်မှ တင်ပါလိမ့်မည်။
မတင်တဲ့အပြင် ဆဲချင်ရင်တောင်မှ ဆဲသွားပါလိမ့်ဦးမည်။
ကိုယ်က ကောင်းတယ်ထင်တာ လုပ်ပေမဲ့ တခြားသူက ကောင်းတယ်ထင်ချင်မှ ထင်ပါမည်။ ကိုယ်ကလုပ်ပေးလိုက်ရပေမဲ့ အားလုံးက ကျေးဇူးတွေ တင်နေမှာပဲလို့တော့ မမျှော်ပါနဲ့။
("လုပ်စရာရှိတာ လုပ်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လုပ်ချင်တာကို လုပ်နေတာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကျေးဇူးခံ ကျေးဇူးစား ကျေးဇူးတရား ဆိုတာတွေ၊ အနစ်နာခံတယ်ဆိုတာတွေ မဆိုင်တာတွေ ထည့်ပြောနေရင် ပြောနေတဲ့ သူတွေဟာ စိတ်ကုန်စရာကြီး၊ ကျွန်မကတော့ အဲလိုလူမျိုးကို ရိုးသားတယ် မထင်တော့ဘူး။ မယုံကြည်ဘူး")
("ကိုယ့်ဝါသနာ ကိုယ့်ခံယူချက်နဲ့ ကိုယ်ကျိုးအတွက် လုပ်နေတာ ကျေးဇူးကို မျှော်လင့်မနေပါနဲ့" စာဖတ်သူက ဒီလို ရပါတယ်။)
ဘာမှ မှ မဆိုင်ပါ။ NOT EQUAL TO ပါ။
Code လုပ်ရင်အကုန်လုပ်ပါ။ စေတနာအဓိကပါ။ ကျေးဇူးတင်ထိုက်သူကို ထုတ်ပြောပြော မပြောပြော ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အပေါ်က ကအမြင်ကပ်လို့ရွဲ့ရေးတာပါ။
တော်ပြီ အချိန်ကုန်တယ်။ ငြင်းရတာပင်ပမ်းတယ်။
ဟုတ်ကဲ့ ကျေးဇူးတင်လိုက်တာ။ တကယ်ပြောတာ။
(Code လုပ်ရင်အကုန်လုပ်ပါ။ စေတနာအဓိကပါ။ ကျေးဇူးတင်ထိုက်သူကို ထုတ်ပြောပြော မပြောပြော ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အပေါ်က ကအမြင်ကပ်လို့ရွဲ့ရေးတာပါ။)
စေတနာ အဓိက (ပြုလုပ်သူ ဘက်မှ)
ကျေးဇူးတင်ထိုက်သူကို ထုတ်ပြောပြော မပြောပြော ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ (ခံယူသူ ဘက်မှ)
(မှတ်ချက် ။ ခုမှ တွေ့လို့)
တချို့သူတွေက ဘာရည်ရွယ်ချက်လဲ တော့ မသိဗျာ
အဲဒီလောက် အချိန်ကုန် အကုသိုလ် အပွားခံပြီး အလိုမတူ သူများတဲ့ စာတွေ တမင်ဆွရေး ပြီး တယောက်ချင်း ကို သေချာ လက်အညောင်းခံ လိုက်ပြန်ပြော နေတာ
ခင်ဗျားမြင်တဲ့ အတိုင်းပဲ နော် ဟ..ဟ
ဒါတောင် သူ့ဘလော့ မှာ မဟုတ်သေးဘူး
အဲဒါလည်း သူ့ အစာ အာဟာရ ပဲ ထင်ပါရဲ့ဗျာ
ကျေးဇူး ဆိုတာ သိပ်မလို ဘူးလို့ ပြောတဲ့သူတွေ အားလုံး ကို ကျေးဇူးတင်လိုက်တာဗျာ...
ဘာကို အလိုမတူတာလဲ ဆိုတာ ပြောပြနိုင်ရင် ပိုပြီး ကျေးဇူးတင်မိမယ်။
(ကျေးဇူး ဆိုတာ သိပ်မလို ဘူးလို့ ပြောတဲ့သူတွေ အားလုံး)
ဘယ်သူက ဘယ်နေရာမှာ အဲဒီလို ပြောတာလဲ။
(တယောက်ချင်း ကို သေချာ လက်အညောင်းခံ လိုက်ပြန်ပြော နေတာ)
ဒုက္ခ ဒါဆို လာမေးတာ ပြန်မဖြေရဘူးလား။ မဖြေပြန်လဲ တမျိုးလာပြောဦးမှာ မဟုတ်လား။ (ဒါနဲ့ စကားမစပ် တချောင်းငင်ကို နှစ်ခါ ပြန်ရိုက်လေ့ရှိတယ်နော်။)
ဟာ ဟ ရီစရာပါ... ' ငါ ' တွေသိပ်များနေလားလို့.. နဖူးပေါ်လက်တင်ပြီး ခေါင်းအေးအေးနဲ့ စဉ်းစားလိုက်ပါအုံး....။
မလိုအပ်ပဲနဲ့ အသေးစိတ်အဓိပါယ် ဖွင့်ချင်နေသူတွေ
(အရှိတရားကိုသိသိကြီးနဲ့)ကို သေသေချာချာလေ့လာပြီးဘုတောကို လွတ်ကြိုက်သဗျာ
ကိုပေါ.... ခင်ဗျားဆိုက်ကို တလေးတစားအမြဲလာဖတ်သူတွေကို မလိုအပ်ပဲနဲ့ ကထိကတွေရဲ့ ပေရှည်လွှာတွေကိုမတင်စမ်းပါနဲ့ဗျာ (အထူးသဖြင့်ရီတာလိုမျိုးပေါ့... တမင်ကိုသူ့လိုပဲ နာမ်စားမသုံးပဲနာမည်ထည့်ရေးတာပါ)
ကိုပေါရေ - လူတယောက်နဲ့ တယောက် အလုပ်တခုလုပ်တာ ရည်ရွယ်ချက်ချင်း တူချင်မှ တူမယ်။ တချို့က ကိုယ့်အတွက်ပဲ ကိုယ်ရည်ရွယ်တာ ရှိသလို ကိုယ့်အတွက်တခုတည်း မရည်ရွယ်သူတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဘလော့၈်ရေးတာလည်း ဒီလိုပဲပေါ့။ တချို့က ကိုယ့်အတွက်၊ တချို့က သူများကိုမျှဝေချင်လို့၊ တချို့က အားလုံးအတွက် ဆိုပြီး တယောက်နဲ့တယောက် ရည်ရွယ်ချက် ထပ်တူကျမှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်အတွက်ပဲ ရေးရေး သူများအတွက်ပဲ ရေးရေး ဘလော့ဂါတိုင်းမှာ တူညီတဲ့အချက်က မိမိရေးတဲ့စာကို သူများဖတ်စေချင်တယ်၊ ကိုယ်ရေးတဲ့စာကို လူများများဖတ်ရင် ပျော်တာချည်းပါပဲ မပျော်တဲ့သူ တယောက်မှ မရှိဘူး။ ကိုယ်ကတော့ အဲလိုမဟုတ်ဘူး ကိုယ့်ဖါသာကိုယ် ပြန်ဖတ်ဖို့ မှတ်တမ်းအဖြစ်ပဲ ထားတာ သူများလာမဖတ်လည်း ဂရုမစိုက်ဘူးလို့ ပြောတဲ့သူကတေ့ လူလိမ်လို့ပဲ ကျွန်မထင်တယ်။
ဖတ်စေချင်လို့ ရေးထားတာကို လာဖတ်တာဟာ စာရေးသူအတွက် ပီတိကို ဖြစ်စေပါတယ် ဒါကြောင့် ကျေးဇူးတင်စရာဆိုတာ ဖြစ်လာပါတယ်။ ဖတ်တဲ့သူတွေကလည်း သူ့အတွက် တစုံတရာ အကျိုးရှိသွားရင် ရေးသူကို ကျေးဇူးတင်စရာ ဆိုတာ ဖြစ်လာပါတယ်။ သဘောထား မတိုက်ဆိုင်လို့ ဒီအပေါ်မှာ ဆွေးနွေးကြရင်လည်း အဲဒီအထဲက အချက်အလက်တခုခုကို ရနိုင်လို့ အကျိုးကျေးဇူး ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျေးဇူးတရားဆိုတာ ဆက်စပ်မှု ရှိတဲ့သူတွေကြား အပြန်အလှန် ရှိတာတော့ အမှန်ပဲ။
ဒီလိုပဲ လုပ်စရာရှိလို့ဖြစ်စေ၊ လုပ်ချင်လို့ ဖြစ်စေ လုပ်နေတဲ့ အလုပ်တွေထဲမှာ အနစ်နာခံခြင်း အများအကျိုးဆောင်ခြင်း အတွက်လည်း ကျေးဇူးတရားက ရှိနေရမှာပဲ ဖြစ်တယ်။ ကျွန်မက ရေငတ်နေတဲ့သူတွေပုံကို ကြည့်ပြီး ကျွန်မကိုယ်တိုင် ခံစားနေရသလို ခံစားရပြီး ရေလှူလိုက်တယ်။ ဒါလုပ်ချင်လို့ရော လုပ်ဖို့လိုလို့ပါ လုပ်ရတယ်လို့ ကျွန်မ ယူဆတယ်။ အဲဒီအတွက် သူတို့မှာ ရေငတ်သူမှာ ရေသောက်ရသွားတာ ကျွန်မဖြစ်ချင်တာကို ဖြည့်ဆည်းပေးလိုက်ရလို့ ကျွန်မမှာ ပီတိတွေရတယ်။ ရေရသွားတဲ့သူတွေမှာလည်း ရေငတ်ပြေသွားတယ်။ ဒါနှစ်ဘက် အကျိုးကျေးဇူး ရှိသွားတယ်။ တခြားဥပမာ တခုကတော့ မြန်မာပြည်က ညီအစ်ကို မောင်နှမမိတ်ဆွေတွေက အခက်အခဲ တခုခုဖြစ်လို့ ဆိုပြီး ကျွန်မ ပိုက်ဆံ ပြတ်နေတဲ့ အချိန်မှာ ပိုက်ဆံ တောင်းလာတယ်၊ ကျွန်မ တခုခု ၀ယ်ဖုိ့ရည်ရွယ်ထားတဲ့ ပိုက်ဆံကို မ၀ယ်ဘဲနဲ့ ပေးလိုက်ရတယ်။ ဒါက ကျွန်မ အတွက်ဘာအကျိုးမှ မရှိဘူး၊ မလွဲသာ မရှောင်သာလို့ ပေးလိုက်ရပေမဲ့ ဆန္ဒလည်း သိပ်မရှိလို့ ကျွန်မအတွက် ဘာအကျိုးမှ မရှိဘဲ အနစ်နာခံလိုက်တာသက်သက် ဖြစ်တယ်။ သူတို့ကို ကျွန်မ စိတ်မပါဘဲ ပေးလိုက်ရတဲ့တွက် ကျွန်မမှာ ဘာကုသိုလ် ကျေးဇူးမှ မခံစားရပေမဲ့ သူတို့မှာ ကျွန်မကျေးဇူး ရှိတယ်ဆိုတာ ငြင်းလို့မရဘူး။
ဒါကြောင့်မို့ ကိုပေါ ဖေါ်ပြတဲ့ အထဲက Rita ရဲ့ "လုပ်စရာရှိတာ လုပ်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လုပ်ချင်တာကို လုပ်နေတာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကျေးဇူးခံ ကျေးဇူးစား ကျေးဇူးတရား ဆိုတာတွေ၊ အနစ်နာခံတယ်ဆိုတာတွေ မဆိုင်တာတွေ ထည့်ပြောနေရင် ပြောနေတဲ့ သူတွေဟာ စိတ်ကုန်စရာကြီး၊ ကျွန်မကတော့ အဲလိုလူမျိုးကို ရိုးသားတယ် မထင်တော့ဘူး။ မယုံကြည်ဘူး" ဆိုတဲ့အချက်ကို ကျွန်မလက်မခံဘူး။
စိတ်ပဲကုန်ကုန် မရိုးသားဘူးပဲ ဘယ်သူထင်ထင် ကျွန်မကတေ့ တကယ် အနစ်နာခံသူတွေဟာ ပျော်လို့ အနစ်နာခံတာ မဟုတ်ဘူး။ မိမိအတွက် မလိုအပ်ပေမဲ့ အများအတွက် လုပ်သင့်လို့ လိုအပ်လို့ လုပ်နေတဲ့သူတွေ ဒီကမ္ဘာပေါ်မှာ အများကြီးရှိပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံမှုတွေဟာ မရိုးသားမှု ကျေးဇူးအတင်ခံလိုမှုက လာတာ မဟုတ်ဘူး၊ တကယ်လိုအပ်နေတာကို ၀င်ဖြည့်ပေးတာသာ ဖြစ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံသူတွေကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မငယ်နိုင် လာရေးတာတွေ့တော့ ဝမ်းသာမိပါတယ်။
နောက်တခု တွေးမိတာက ကိုအင်ဒီ ဘလော့က ကွန်မန့်တခုကို ဖတ်ရင်းနဲ့ပါ။ ခု မငယ် ရေးတာကိုဖတ်ရတာနဲ့ တူပါတယ်။
အဲဒါက မိသားစု အရေးကိစ္စပါ။
ဒါက ခေါင်းစဉ်တခု ခွဲထုတ်ရမယ့် ကိစ္စ ဖြစ်ပါတယ်။
(ဘလော့ဂါတိုင်းမှာ တူညီတဲ့အချက်က မိမိရေးတဲ့စာကို သူများဖတ်စေချင်တယ်၊ ကိုယ်ရေးတဲ့စာကို လူများများဖတ်ရင် ပျော်တာချည်းပါပဲ မပျော်တဲ့သူ တယောက်မှ မရှိဘူး။ ကိုယ်ကတော့ အဲလိုမဟုတ်ဘူး ကိုယ့်ဖါသာကိုယ် ပြန်ဖတ်ဖို့ မှတ်တမ်းအဖြစ်ပဲ ထားတာ သူများလာမဖတ်လည်း ဂရုမစိုက်ဘူးလို့ ပြောတဲ့သူကတေ့ လူလိမ်လို့ပဲ ကျွန်မထင်တယ်။)
ကျွန်မ မောင်သစ်ဆင်းစာတွေ ရိုက်တင်တော့ တခြားစာတွေထက် လာဖတ်သူနည်းတာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်ဘာသာတင်ချင်လို့ ရိုက်တင်တာကို ကြိုက်ကြတဲ့ အခါမှာ ကျွန်မ လာဖတ်သူတွေကို ကျေးဇူးတင်တယ် ဆိုတာ post မှာ ပါပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
မငယ်အနေနဲ့ ပေးသူနဲ့ ယူသူကို ခွဲမပြောဘဲ နဲနဲ ရောနေတယ် ထင်မိပါတယ်။ နောက်တခု အပြန်အလှန်ဆက်စပ်တဲ့ အညမည သဘော။ အလှူပြုသူ အလှူပေးသူလို့ မငယ်က ဥပမာပြသွားတယ်။ ဒီ သဘောတရား (ကျေးဇူးသဘော) ဆိုတာ မရှိဘူးလို့ ဘယ်သူမှ ငြင်းမထားပါဘူး။ နောက် ဒီ အလှူကိစ္စဆိုတာဟာလဲ ဒီခေါင်းစဉ်အောက်ကလို့ မထင်မိဘူး။
မငယ် ဇီဇဝါ ဘလော့မှာ ကိုဝတုတ်ရေးတာ မဖတ်ရသေးရင် ဖတ်စေချင်ပါတယ်။ သူကတော့ ဖလော်ရှုထောင့်က ရေးတာဆိုတော့ ခု ရေးသူတွေနဲ့ ကွဲပြီး ဘက်မရှိဘဲ သဘောတရားသက်သက် ဖြစ်လို့ မငယ် ဖတ်ရတာ ပို အဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်။
ကျွန်မရဲ့ ဆိုလိုရင်းကတော့ သူ့တာဝန် ကိုယ့်တာဝန် (အနုပညာသမား/ စာနယ်ဇင်း)(ဆရာဝန်/ လူနာ)(ဆရာ/ တပည့်) ကြားက ပတ်သတ်မှုမျိုးကို ပို ရည်ညွှန်းပါတယ်။ မြစ်ဖျားခံရာကတော့ စာနယ်ဇင်းဘက်က ကျေးဇူးတရားဆိုတာကြီးနဲ့ ကိုင်ပေါက်တဲ့ ကိစ္စပါပဲ။ ဒီကနေ စ လာကြတာပါ။
ဆိုတော့ ဒီနေရာမှာ မိသားစု အရေးကိစ္စတွေ ထည့်မရဘူးတော့ မပြောလိုပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ထည့်လိုက်ရင် တမျိုးတော့ သွေဖည်သွားပါလိမ့်မယ်။
ပို့စ်ထဲမှာ ရေးထားခဲ့တဲ့အတိုင်း ဒီအယူအဆနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျနော်နှစ်ခြိုက်သော်လည်း မငယ်နိုင် နှစ်ခြိုက်ရမယ်လို့ မမျှော်လင့်ပါ။ ကိုယ်နှစ်သက်၊ လက်ခံတဲ့အလျောက် ဖော်ပြခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအယူအဆကို လက်ခံလာအောင် အတင်းအကြပ် ဖိအားပေး စည်းရုံးဖို့လည်း ရည်ရွယ်ချက်မရှိပါ။း-) ရီတာပြောထားသမျှဟာ အထူးတလည် ထပ်ရှင်းစရာမလိုအောင် ပြည့်စုံတဲ့အတွက် ကျနော့်သဘောထားကတော့ ပို့စ်ထဲမှာ ပါတဲ့အတိုင်းရယ်လို့သာ မှတ်ယူပါရန်။
(မိမိအတွက် မလိုအပ်ပေမဲ့ အများအတွက် လုပ်သင့်လို့ လိုအပ်လို့ လုပ်နေတဲ့သူတွေ ဒီကမ္ဘာပေါ်မှာ အများကြီးရှိပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံမှုတွေဟာ မရိုးသားမှု ကျေးဇူးအတင်ခံလိုမှုက လာတာ မဟုတ်ဘူး၊ တကယ်လိုအပ်နေတာကို ၀င်ဖြည့်ပေးတာသာ ဖြစ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံသူတွေကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။)
စွန့်လွှတ် အနစ်နာခံမှုဆိုတာ ဘေးလူက ကြည့်တဲ့အခါ မြင်ရတဲ့သဘောတရားပါ။
သူဌေးသမီး နိုက်တင်ဂေးဟာ လူနာတွေကို မပြုစုလဲနေလို့ရပါတယ် ဆိုတယ်။ သူဌေးတယောက်ကို လက်ထပ် ချမ်းချမ်းသာသာ နေရမယ့် ဘဝနဲ့ ညဘက် မီးအိမ်ကလေးဆွဲလို့ လူနာတွေကို ပြုစုရတဲ့ ပင်ပန်းတဲ့ဘဝ ယှဉ်ကြည့်ရင် (ဘေးကကြည့်တဲ့လူအတွက်) သူဟာ နစ်နာတာပါပဲ။ ပြီးတော့ အဲဒီခေတ်က သူနာပြုဆိုတာ ဒီခေတ်လို အမျိုးကောင်းသမီးတွေ မလုပ်ကြဘူးဆိုတယ်။ အထင်သေးကြတယ် ဆိုတယ်။ ဆိုတော့ ကျွန်မ ဘေးလူအနေနဲ့ ကြည့်တဲ့အခါ သူ့မှာ နစ်နာလိုက်တာ ထင်မိပါတယ်။ ရွေးချယ်ခွင့်တွေ အများကြီးနဲ့။
ဒါပေမဲ့ သူ့နေရာကကြည့်ရင် သူလုပ်ချင်တာကို သူရွေးချယ်လုပ်ကိုင်တာမို့ သူ့စိတ်မှာ နစ်နာတယ် ထင်စရာ အကြောင်း မရှိပါဘူး။ ထင်လဲ ထင်မှာ မဟုတ်တာ ကျိန်းသေပါတယ်။ သူ လုပ်ချင်တာကိုး။ ဒါဖြင့် သူလုပ်ချင်တာ လုပ်နေတာပဲ။ သူ့ပြုစုမှုကို ခံရတဲ့ လူနာတွေ ကျေးဇူးတင်စရာမလိုဘူးလို့ ဆိုလို့ မရပါဘူး။ အဲဒီလိုလဲ ဘယ်သူကမှ မဆိုခဲ့ပါဘူး။
မိဘတွေက သူ့လုပ်ငန်းကို ကန့်ကွက်ခဲ့ရင်ဖြစ်ဖြစ်၊ မိဘသဘောကျ သူလုပ်ချင်ရာကို လုပ်ခွင့်မရခဲ့ဘဲ သူ မလိုချင်တဲ့ သူဌေးတယောက်ကို လက်ထပ်၊ အိမ်ထဲမှာပဲ အိမ်ရှင်မ လုပ်ဆိုရင် ချမ်းချမ်းသာသာ မကြောင့်မကျတော့ နေရပါရဲ့... သူဟာ မိဘအတွက် မိဘအလိုကျ အနစ်နာခံလိုက်ရတာလို့ ခေါ်ပါတယ်။ အဲဒီ နစ်နာမှုဟာ ခုနလို ဘေးအမြင်အရ မဟုတ်တော့ဘဲ ကာယကံရှင် သူ့အနေနဲ့ (မိဘဆန္ဒနဲ့ သူ့ဆန္ဒကို လဲလိုက်ရတဲ့အတွက်) နစ်နာတဲ့ နစ်နာမှုပါပဲ။
ကျွန်မ ဆိုလိုချင်တာကို မငယ် သဘောပေါက်မှာပါ။
ညစာ မစားရသေးလို့ ခဏ နားပါဦးမယ်။
ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အခုအချိန်အထိ ရီတာ ရေးသွားသမျှ ကြိုက်တယ်။ ရှင်းကနဲ လင်းကနဲ နားလည်သွားတယ်။ ပေးသွားတဲ့ ဥပမာလေးတွေ ထိမိတယ်။
ကျေးဇူးတရား အကြောင်းပြောရ ၊ ငြင်းရရင် ဆုံးမယ်မထင်ပါ ၊ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော် သိချင်တာက ကိုပေါ ဘလော့ မှာ မရီတာ ကျေးဇူးတရားနဲ. ပတ်သက်တဲ့ ကွန်.မန်. ကိုတင်ထားတာ ဘလော့ အငှား လုပ်နေတာလားလို.ပါ ၊ ကွန်မန်.အပေါ်မှာ ကွန်.မန်. တွေ ဝေဆာနေတာ တွေ.လိုပါ၊ ၊ ထက်ထက်မိုးဦး အကြောင်းတင်ထားတဲ့ ပို.စ်နဲ.ဆက်ပြီး တွေးမိတာက ကိုပေါ က အငြင်းအခုံ နှင့် ဖိုက်တင်ပလေးတဲ့ ကွန်.မန်.တွေ ရေးစေမဲ့ ပို.စ်တွေ တင်ချင်ပုံရပါတယ်၊ (ကိုပေါ နာမည်အစား ကိုမီးပွား လို. နာမည်ပြောင်း ဖို. အကြံပြုချင်ပါတယ်) ၊ ဒီကြားထဲ ကိုပေါ ဘာပဲရေးရေး ၊ ဒါမှမဟုတ် သူများရေးတဲ့ ပို.စ်ကို တင်ထားတဲ့ ကိုပေါ ကို အသလွတ် ထောက်ခံနေတဲ့ သူကလည်း ရှိနေသေးတယ်၊ နောက်တစ်ခု သိချင်တာ က သမဂ္ဂများ ပေါများလှတဲ့ လောကကြီး မှာ ကိုပေါ နဲ. မရီတာ တို. နှစ်ယောက် ဘလော့ဂါများ ညီညွတ်ရေး သမဂ္ဂများ ဖွဲ.စည်းထားသလားလို.ပါ ၊
ကျေးဇူးပြုသူတွေအနေနဲ့ သူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေ အပေါ်
မှာ ကျေးဇူးခံကျေးဇူးစား စကားတွေ၊အနစ်နာခံ တာတွေ၊
မပြောသင့်တာတော့အမှန်ပါ။ပြောလာခဲ့ရင် မရိုးသား တဲ့
တရားအကြောင်းသိစေလို လို့ ပြောတာမျိုးကိုမဆိုလိုပါ)
တုံပြန်သိတတ်ရမှာပါ။ ဒါဟာကျွန်တော်နားလည်မိတဲ့ ကျေးဇူးတရားအကြောင်းပါ။ကိုပေါ၊မရီတာ တို့ဆိုလိုတာ
လည်းဒီအတိုင်းပဲလို့ထင်ပါတယ်။ဒီအထိ ကျွန်တော် သဘောကျကျေနပ်မိပါတယ်။ဒါပေမယ့် ကျေးဇူးပြုသူတွေမှာ အနစ်နာခံတာ၊စွန့်လွှတ်ရတာတွေ
မရှိဘူးလို့တော့ပြောလို့ မရပါ။နိုက်တင်ဂေး ဟာ သူလုပ်
လုပ်ချင်တာ မှာ လုပ်သင့်တာကို ရွေးချယ်ခဲ့တာ၊လုပ်
မယ့်သူမရှိလို့ တာဝန် ဝင်ယူတဲ့သဘော သာဖြစ်ပါတယ်
အများအကျိုးဆောင်တဲ့လူတွေမှာ သူတို့ရဲ့ အချိန်တွေ၊
သူတို့လုပ်ချင်တဲ့စိတ်လုံးဝမပါလို့ လည်းတရားသေ ပြော
လို့ မရပါ၊စေတနာ။ဝါသနာ ဟာ လုပ်ချင်တဲ့စိတ်ဆိုရင်၊
အနစ်နာ ဟာ လုပ်သင့်တဲ့စိတ် လို့ကျွန်တော်မြင်မိပါတယ်။အခြေအနေ၊အချိန်အခါ
အပေါ်မှာ ဖြစ်တည်နေတဲ့ သူတို့ရဲ့ စိတ်ခံစားမှုကပဲ သူ
ဒါရိုက်တာ မီးပွား ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ ရှိပြီးသားဆိုတော့ နာမည်မပြောင်းတော့ပါဘူးဗျာ။း-)
အခုထိတော့ ဘယ်သူနဲ့မှ ဘလော့ဂ်သမဂ္ဂ မထောင်ရသေးပါဘူးဗျာ။ အုပ်စုဖွဲ့ရတာ ဝါသနာမပါလို့။
အထူးသဖြင့် ရီတာတို့ ညီလင်းဆက်တို့နဲ့ဆို ဘလော့ဂ်ပေါ်ကလွဲလို့ အီးမေးလ်လည်း တခါမှ မဆက်သွယ်ဘူး၊ လူချင်းလည်း တခါမှ မတွေ့ဖူးသေးဘူးဗျ။ ဒီလိုပဲ သူတို့ စာတွေကဆင့်သာ တချို့ အယူအဆတွေ၊ အမြင်တွေကို နှစ်သက်တာ၊ ထပ်တူကျတာတွေ ဖြစ်လာတာပါ။
ကျနော်ရေးတဲ့ ပို့စ်တွေဟာ ငြင်းခုံစရာ၊ ဖိုက်တင်ပလေးစရာ ပို့စ်တွေကို တင်ချင်ပုံရတယ်ဆိုတဲ့ အမြင်ကလည်း မှန်နိုင်ပါတယ်။ ကျနော်ကတော့ အထူးတလည် အားထုတ်တာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော်ရေးချင်ရာကို တွေးမိတဲ့အတိုင်း ရေးတာပါပဲ။ ကွန်မင့်လာထားတဲ့လူတွေထဲမှာ မြင်ပုံချင်းမတူကြတဲ့အခါ၊ အယူအဆမတူတဲ့အခါ ငြင်းကြခုံကြ၊ အယူအဆတွေ ဖိုက်တင်ပလေး ကြတယ်ပေါ့။
ကျနော်နဲ့ အမြင်မတူတာ ကွန်မင့်လည်း လွတ်လွတ်လပ်လပ် ကွန်မင့်လို့ရတယ်။ ရိလို့လည်း ရတယ်။ စောင်းချိတ်ပြီးတော့ ရေးလို့လည်း ရတယ်။ သရော်လို့လည်း ရတယ်။ ဒေါသနဲ့ ရေးလို့လည်း ရတယ်။ အကျိုးနဲ့အကြောင်းနဲ့ အချိတ်အဆက်မိမိ ပညာသားပါပါ ချေပလို့လည်း ရတယ်။ စာဖတ်သူရဲ့သဘော။ သူတပါးရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကို အလွန်အကျွံ မတိုက်ခိုက်သရွေ့ လုံးဝ မော်ဒရိတ် မလုပ်ဘူး။ လွှတ်ပေးတယ်။ လွတ်လပ်ခွင့် အပြည့်ရှိရမယ်။ ကျနော်ကိုယ်တိုင်လည်း အဲသည် တဒင်္ဂမှာ ရှိနေတဲ့ စိတ်အခြေအနေအလျောက် တုန့်ပြန် ကွန်မင့်လုပ်ရင် လုပ်တာပါပဲ။ အခုတလော အလုပ်များပြီး အချိန်သိပ်မပေးနိုင်လို့ အရင်ကလောက် ကွန်မင့်မပြန်နိုင်ဘူး။ အရင်ကဆို သူများဘလော့ဂ်တွေမှာပါ လိုက်ပြီး ကွန်မင့်ရှည်ကြီးတွေ ကျနော်ရေးတယ်။ ကျနော့်ဘလော့ဂ်ဟာ ကျနော်ဖြစ်စေချင်တဲ့ ပုံစံအတိုင်း တသွေမတိမ်း ကျနော် ဖန်တီးထားတာပါ။ အင်တာနက်နည်းပညာ မကျွမ်းလို့ လုပ်ချင်သလောက်အထိ မလုပ်နိုင်သေးတာပဲ ရှိပါတယ်။
ကိုပေါ ရဲ. Leave your comment အောက်က Do not တွေများနေလို. ကွန်.မန်.အရှည်ကြီး မရေးရလို. မပါတာဘဲ ကျေးဇူး တင်ရမလို ဖြစ်နေပြီလို. အရင်က ကွန်.မန်. လုပ်ဦးမလို. ၊ ခု ကိုပေါရဲ. ကွန်.မန်.ကို ဖတ်ပြီး ကိုပေါ ရဲ. သဘာထား နဲ. လွတ်လပ်ခွင့်ရှိတာ သိရတော့ လေးစားမိ ၊ ကျေးဇူးတင်မိပါတယ် ၊ ကျေးဇူး အကြောင်းနဲ.ပတ်သက်တာ ရေးထားတဲ့ ပို.စ်မှာ ကျေးဇူးအကြောင်းတွေ ထပ်နေတာ ငေါ့နေတယ်လို. မထင်စေချင်ပါ ၊ တကယ့်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ၊ ကိုပေါ နှင့် မိသားစု ကျန်းမာ ရွှင်လန်းပါစေ ၊
ကိုယ့်ဟာကို မျက်စိအညောင်းခံဖတ်ပြီးမှ သဘောပေါက်လိုက်တာက မပြည့်တဲ့အိုးတွေရဲ့ အုပ်စုဖွဲ့ဘောင်ဘင်ခတ်နည်းတမျိုးပါပဲလို့။
နောက်များလည်း ကိုယ့်စေတနာနဲ့ကိုယ် မျက်စိမညောင်းအောင် ဒီလိုဘလော့ခ်များ ဝေးဝေးကရှောင်ရမည်ဟု သဘောပေါက်သွားကြောင်း။
ကိုမောင်လေး ဆိုလိုချင်တာကို နားလည်ပါတယ်။ ခုချိန်ထိ ကျွန်မ ဆိုလိုရင်းကို နားလည်တာကို သိရလို့လည်း ဝမ်းသာမိပါတယ်။
(နိုက်တင်ဂေး ဟာ သူလုပ်
အဲဒီ အချက်ကတော့ အပြင်ထွက်သွားတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဒါက ကိုမောင်လေး စိတ်နဲ့တွေးလိုက်တဲ့ အချက်ဖြစ်လို့ပါ။ ကျွန်မအနေနဲ့တွေးရင်လည်း ကျွန်မဆိုရင် မလုပ်ချင်ဘူးလို့ပဲ ထွက်မှာပါ။ မလုပ်ချင်ဘဲနဲ့ စေတနာဦးဆောင်ပြီး လုပ်ခဲ့ရင်၊ ဦးနှောက်နဲ့ တွေးပြီး လုပ်သင့်တာ လုပ်ခဲ့ရင် ဒါ အနစ်နာခံတယ် ခေါ်တာပေါ့။ မှန်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဒါကို ကိုယ့်ဘာသာပြောရင် ဟုတ်ပါတယ်။ နိုက်တင်ဂေးကို ထည့်ပြောရင်တော့ ချော်သွားပြီ။ နိုက်တင်ဂေးမှ မဟုတ်၊ သူများ ထည့်ပြောရင်ကို ချော်သွားမှာပဲ။
ဒါပေမဲ့ မှားတယ်လို့တော့ မဆိုနိုင်ပါဘူး။ ကာယကံရှင်က သူ့ကိစ္စကို ဘယ်အခြေအနေမှာ ဘယ်လိုသဘောထားထား ဘေးအမြင်အရ ကိုယ်ကျိုးအတ္တဖယ်ပြီး၊ အများအကျိုးဆောင်တယ်ဆိုတာနဲ့ အနစ်နာခံတယ်လို့ မြင်ကြမှာပါပဲ။ (အထူးသဖြင့် မြန်မာ အသိုင်းအဝိုင်းမှာ)
ကျွန်မ ကိုယ်တိုင်လည်း ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဘေးအမြင်အရ နိုက်တင်ဂေးဟာ နစ်နာတယ် မြင်ပါတယ်လို့။
ကိုမောင်လေး ပြောသလို (ဘယ်သူမှ
လူနာတွေကို ပြုစုချင်မယ်မထင်ပါ) ဆိုတာကတော့ အစွန်းထွက်သွားတယ်လို့ ကျွန်မ ထင်မိတဲ့ အပြင် သိရသလောက် ဆရာဝန်အလုပ်/ သူနာပြုအလုပ်ကို *(တကယ်)* ဝါသနာပါလို့ လုပ်ကြသူတွေဟာ အဲဒီကိစ္စတွေ လုံးဝမှ မရွံတတ် မရှာတတ်ကြပါဘူး။
ကိုမောင်လေးအနေနဲ့လည်း တခြား ကိုယ် လုပ်ဖို့ စိတ်အားထက်သန်တဲ့ အရာကို အစားထိုးလို့ တွေးကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်စိတ်ပါဝင်စားတဲ့ အလုပ်အပေါ်မှာ နောက်တွန့်တဲ့ စိတ် မရှိတဲ့ သဘောပါပဲ။
ANY MENTAL HOSPITAL IN SINGAPORE?
BRING KO PAW AND MS. RITA THERE AND CHECK WITH PSYCHIATRIST.
PLEASE BRING KO PAW AND MS RITA THERE AND CHECK WITH PSYCHIATRIST.
ဒီ post က one min interview post ကို စကားပြေ ပြန်ထားတာဆိုတော့.. ကိုပေါကလဲ post သတ်သတ်ရေးထားတယ်၊
http://zizawa.wordpress.com/2010/06/09/ကျေးဇူးတရား-self-ownership-and-all-that/ post ကိုလဲ ကြိုက်တယ်၊
စကားပြေ post3ခုကို 5/6 ခေါက်လောက် ဖတ်ကြည့်ပြီး တလွဲတွေးတုန်းဆိုရင်.. စကားပြေကို ထက်ပြီး စကားပြေပြန်ပြလိုလဲ ပေါက်ကြမယ်လို့ မထင်ဘူး..
Thanks all for bringing up these types of topics..
"If you choose to do something, then you shouldn’t say it’sasacrifice because nobody forced you to do it." -Daw Suu Kyi
ဟိုတလောကမှ ဒီ interview answer လေးကို ဖတ်မိလို့ ပိုပြီး အထင်ကြီးလေးစားသွားတယ်၊ ဘယ်နာမည်ကြီးမှ သူများအတွက် အနစ်နာခံတယ် သူ့ကို ကျေးဇူးတင်ရမယ်လို့ မပြောခဲ့တာ သေချာတယ်
ရီတာက သူ့ကို ကြိုက်မဲ့လူမရှိလို့ နည်းနည်းဂေါက်နေ
တယ်၊ ရုပ်ကိုကြည့် ဂျော်လီဆွေနဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်။
ပို့စ် အတွက် ကျေးဇူးပါ။ အတွေးအခေါ်တွေ များများ ဖတ်ခွင့်ရလို့။
ပြီးတော့ ကွန်မန့်တွေ ဖတ်ပြီး ခဏခဏ ရယ်ရလို့ အခုတလော တင်းကျပ်နေတဲ့စိတ်တွေ တော်တော် လျှော့သွားတယ်။
မခရေဖြူရဲ့ အကြွေးစာရင်း ရှင်းတမ်းဖတ်အပြီးမှာ အသံတော်တော်ကျယ်ကျယ် ရယ်ဖြစ်တယ်။
မရီတာရဲ့ ပြန်လည်ဖြေရှင်းချက်တွေ ဖတ်လို့ ကောင်းပါတယ်။ ဆိုလိုရင်းအမှန်ကို အမြင်မပေါက်တဲ့ (သို့) တမင် ကတ်သတ်ပြီး တန်ပြန်မေးတဲ့ ကွန်မန့်တွေကို အချိန်ပေးပြီး ဖြေနေရတဲ့ မရီတာကို နားလည်ပေးမိတယ်။ (တစ်ချောင်းငင် နှစ်ခါရေးတာကိုပါ ကွန်မန့်တွေ မနားတမ်း ရေးတဲ့ကြားက ဟာသမြောက်အောင် ရေးပေးတာ သဘောကျတယ်။ )
စာနယ်ဇင်းသမားတွေ (အားလုံးကို မဆိုလိုပါ)ရဲ့ ကျေးဇူးအရမ်းတင်ခံချင်တဲ့စိတ်ကတော့ တကယ့်ကို စံနမူနာပါ။
အနုပညာသမား အသစ်တွေကို ပိုက်ဆံမရရင်ရော မြေတောင်မြောက်ပေး (သူတို့ အခေါ်အဝေါ်) မှာလား။
အနုပညာသမား အသစ်တွေ မအောင်မြင်ခင် စာနယ်ဇင်းမှာ ကိုယ့်အကြောင်းလေး မဖြစ်စလောက်လေးပါဖို့ ငွေလည်းပေးရ၊ တောင်းတောင်းပန်ပန်လည်း ပြောရ။ ပြီးရင် သူတို့မှာ ဘယ်လောက်တောင် ခက်ခက်ခဲခဲ ထည့်ရတဲ့အကြောင်း (ငွေများများ တောင်းကောင်းအောင်) ပြောရ။ တကယ့် ကျေးဇူးရှင်တွေပါပဲ။
(နာမည်မကြီးခင် ကိုယ့်ကို ထည့်ပေးချင်အောင် ငွေပေးရတာ မပြောချင်ပေမယ့် ကျေးဇူးရှင်သဖွယ် နာမည်ကောင်းလိုချင်တာကိုတော့ စိတ်အင်မတန် ပျက်မိတယ်။)
အောင်မြင်သွားရင်တာ တကူးတက လာမေးကျတာ။ အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့ အနုပညာရှင်တွေက သူတို့ ဖြေပေးရလို့ ကျေးဇူးရှင်တွေပါလို့ ပြောတာ ကြားဖူးလို့လား။
မနေနိုင်လို့ အနည်းငယ် ၀င်ရေးသွားတယ် ကိုပေါရေ။
http://dollardollardollardollardollar.blogspot.com/ ပြောဖူးတဲ့ သူ့ကိုအအားဆုံးဘလော့ဂါဆုပေးရမယ်ဆိုတာ
Ko paw ka yan tite pay nay tar pal
Yita က ကျွန်မ ပေးတဲ့ ဥပမာက ဒီခေါင်းစဉ် အောက်ကမဟုတ်ဘူးလို့ ပြောထားပါတယ်။ ထက်ထက်မိုးဦးနဲ့ စာနယ်ဇင်းကိစ္စမှာ ကျေးဇူးခံကျေးဇူးစား အယူအဆနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကိုပေါတို့ Rita တို့ ဆိုလိုတာကို ကျွန်မအနေနဲ့ ဆက်စပ်ပတ်သက်နေတဲ့ သူတွေမှာ အပြန်အလှန်တော့ ကျေးဇူးရှိတယ်ဆိုတာ ဖြည့်စွက်ပြောတာကလွဲပြီး ကျန်တာသိပ်ပြီး ငြင်းစရာမရှိပါဘူး။ အခုအပေါ်က ကျွန်မ မှတ်ချက်ဖြစ်လာတာကလည်း ထက်ထက်မိုးဦးနဲ့ စာနယ်ဇင်း မူရင်းကိစ္စထက် Yita ပြောတဲ့ စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံသူတွေဟာ တခြားသူတွေအတွက် ကျေးဇူးမရှိဘူး သူဝါသနာပါလို့ လုပ်နေတာသာ ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ ဥပမာကြောင့် ကျွန်မပြန်ရေးတဲ့ မှတ်ချက်သာ ဖြစ်တယ်။ စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံတယ်ဆိုတာ ဘယ်သူ့အတွက်ပဲလုပ်လုပ် အချိန်၊ ငွေ၊ လုပ်အား စသည်ဖြင့် မိမိမှာ ရှိတာတခုကို လှူလိုက်ရတာပါပဲ ဒါကြောင့် ကျွန်မက လှူတာနဲ့ ဥပမာပေးတာသာ ဖြစ်တယ်။ ဒီလို ပေးလိုက်ရတာကို ကျေးဇူးရှိတယ်လို့ တုတ်ပြောဖို့ မလိုပေမဲ့ ကျေးဇူးရှိတယ်ဆိုတာကိုတော့ ငြင်းလို့မရဘူးလို့ ကျွန်ဆိုချင်တာ ဖြစ်တယ်။ (ထုတ်ပြောလည်း ကြားရသူအတွက် တမျိုးဖြစ်တာပဲ ရှိမယ်၊ မှားတော့မမှားပါဘူး)
Yita ပေးတဲ့ နိုက်တင်ဂေးလ် ဥပမာမှာ Mg Lay ပြောထားပြီး ဖြစ်တဲ့အတွက် အသေးစိတ်ကို ကျွန်မ ထပ်မပြောပေမဲ့ သဘောသဘာဝကို နည်းနည်း ဖြည့်စွက်ချင်ပါတယ်။ အေးအေးဆေးဆေး နေလို့ရလျက်နဲ့ သူဌေးသမီး နိုက်တင်ဂေးလ်က ချေးကျုံးသေးကျုံး အံဖတ်ကျုံး အနာပုပ်တွေကို ကိုင်တွယ်တာ ၀ါသနာမဟုတ်ဘူး၊ နိုင်ငံရေး မလုပ်တော့ဘူး မိမိ မိသားစု စားဝတ်နေရေးပဲ လုပ်ပြီး အေးအေးဆေးဆေး နေပါတော့မယ်လို့ လက်မှတ်လေး တလုံးထိုးပြီး ထွက်လာလို့ ရလျက်နဲ့ မနေပဲ ထောင်ထဲ၊ နေအိမ်ထဲမှာ အကျဉ်းကျ ညှဉ်းဆဲဆံနေတာ ၀ါသနာမဟုတ်ဘူး။ အဲဒါတွေကို ၀ါသနာပါလို့ ခံနေတယ် လုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ သူတွေကတော့ စိတ်မှန်သူတော့ ဖြစ်နိုင်မယ်မထင်ဘူး။ သူတို့ဝါသနာက လူနာတွေကို သက်သာစေလိုခြင်း၊ တိုင်းပြည်ရဲ့ ပြဿနာကို ပြေလည်စေလိုခြင်းဆိုတဲ့ အများအကျိုးဆောင်လိုခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ အများအကျိုးဆောင်လိုတဲ့ စိတ်နဲ့သူများ မလုပ်နိုင်တာကို လုပ်ပြီး အလဲအလည် ပြုတာသာ ဖြစ်တယ်။ ဒါကို ကျေးဇူးတင်စရာမလိုဘူး သူတို့ခံယူချက်နဲ့ သူတို့ဖါသာသူတို့ ၀ါသနာပါလို့ သူတို့လုပ်တာလို့ လုပ်တာလို့ ပြောရင် လောကမှာ ကျေးဇူးတင်စရာဆိုတာ ဘာမှ ရှိတော့မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ကျွန်မ ထင်တယ်။ (ထက်ထက်မိုးဦးနဲ့ စာနယ်ဇင်းသမားကိစ္စကို ကျွန်မရှင်းပါတယ်။)
harmlock ရေ- ဒါတောင်မှ ကျွန်မက စာမေးပွဲ ရှိနေလို့ ဘလော့ဂ်တွေကို အရောက်ကျဲနေတာ။ ကျွန်မဘလော့ဂ်ကို ရှင်တို့က နိုင်ငံရေးဘလော့၈်လို့ အမည်ပေးထားပေမဲ့ ကျွန်မက အစုံရေးတော့ ဘလော့ဂ်စုံက လူတွေရောက်ပြီး ကျွန်မကလည်း ဘလော့ဂ်စုံကို ပြန်ရောက်ပါတယ်။ ကျွန်မနာမည်ကို ဘလော့ဂ်တွေမှာ မမြင်ချင်ရင်တော့ ဘလော့ဂ် မလည်ပါနဲ့လို့ပဲ အကြံပြုပါရစေ။
( အဲဒါတွေကို ၀ါသနာပါလို့ ခံနေတယ် လုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ သူတွေကတော့ စိတ်မှန်သူတော့ ဖြစ်နိုင်မယ်မထင်ဘူး)
အဲဒီလိုပြောမယ့်သူတွေ ရှိနိုင်တယ်လို့ တွေးခဲ့မယ် ဆိုရင်လဲ တွေးတဲ့လူကိုယ်တိုင်က စိတ်မမှန်နိုင်တော့ဘူး လို့ ထင်မိပါတယ်။
(ဒါကို ကျေးဇူးတင်စရာမလိုဘူး သူတို့ခံယူချက်နဲ့ သူတို့ဖါသာသူတို့ ၀ါသနာပါလို့ သူတို့လုပ်တာလို့ လုပ်တာလို့ ပြောရင် လောကမှာ ကျေးဇူးတင်စရာဆိုတာ ဘာမှ ရှိတော့မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ကျွန်မ ထင်တယ်)
ဘယ်သူကမှ အဲဒီလို မသတ်မှတ် မပြောခဲ့တဲ့အတွက် ထပ်ရှင်းစရာ လိုမယ် မထင်ပါ။
(Yita ပြောတဲ့ စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံသူတွေဟာ တခြားသူတွေအတွက် ကျေးဇူးမရှိဘူး သူဝါသနာပါလို့ လုပ်နေတာသာ ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ ဥပမာကြောင့် ကျွန်မပြန်ရေးတဲ့ မှတ်ချက်သာ ဖြစ်တယ်)
အဲဒီလို သဘောပေါက်နေကြလို့ ပြန်ရှင်းဖို့ တင်ထားတဲ့ post မှာ အဲဒီတိုင်း ပြန်ရေးချလိုက်တာ ဘာမှကို ထပ်ပြောစရာ မရှိတော့ပါ။
တချက်ကလေးပဲ။ ကိုယ် ပြောခဲ့တာမှာ ကိုယ်တိုင် ဘလော့ရေးနေလို့ ဘလော့ရေးသူနေရာကနေ ပြောခဲ့တယ်။ ကိုယ်လုပ်ချင်လို့ လုပ်နေတာမှာ ဘယ်သူ့အတွက်မှ အနစ်နာခံ အချိန်ကုန်ခံလို့ ရေးနေတာ မဟုတ်ဘူး ဆိုတာပဲ။ အဲဒါဟာ ပြုလုပ်သူနေရာကနေ ရေးခဲ့တဲ့ သဘောတရားဖြစ်တယ်။ ကိုယ်ဖတ်ဖို့ကိုယ်ရေးတာ ဘယ်သူလာဖတ်ဖတ် မဖတ်ဖတ် ဂရုမစိုက်ဘူးလို့ အဓိပ္ပါယ် မပေါက်ဘူး။
ဒါပေမဲ့ ဘယ်သူ့စိတ်ကျေနပ်မှုအတွက်မှ ရေးတာလဲ မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့်စိတ်ကျေနပ်မှုအတွက် လုပ်တာသာ ဖြစ်တယ်။ ကိုယ်ရေးတာကို လာဖတ်ကြတာ လာကြိုက်ကြတာ တွေ့ရရင်တော့ ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ ဆိုထားသေးတယ်။
"ကိုယ်ဖတ်ဖို့ကိုယ်ရေးတာ ဘယ်သူလာဖတ်ဖတ် မဖတ်ဖတ် ဂရုမစိုက်ဘူး" ဆိုတာဟာ မငယ်နိုင်ဘာသာ ထပ်ဖြည့်လိုက်တဲ့ ကိုယ်က မဆိုလိုတဲ့ မဆိုင်ရာ မဆိုင်ကြောင်းသာ ဖြစ်တယ်။
((("နောက်တခုက ကျေးဇူးတရားနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ ကိစ္စမှာ ဘာလို့ အဲဒီလို တလွဲကောက်ကြသလဲ။ ကျွန်မစဉ်းစားမိသလောက်က ဆိုလိုရင်းကို သေချာမစဉ်းစားနိုင်တာထက်၊ မစဉ်းစားချင်တာ နဲ့ သူများကို နှိပ်ကွပ်ချင်စိတ် များနေလို့ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဥပမာ- ဗမာဝတ်စုံ ဝတ်ခြင်း၊ မဝတ်ခြင်း။ ဝတ်တဲ့လူတွေ၊ ဝတ်သင့်တယ်လို့ ထင်တဲ့လူတွေဟာ သူတို့ဘာသာ ဝတ်ချင်လို့၊ ယဉ်ကျေးမှုကို ချစ်လွန်းလို့ ဆိုတာထက် ဒါကို နင်းပြီး မဝတ်တဲ့လူတွေကို ဆော်ချင်တဲ့ စိတ်က ဦးဆောင်တယ်။ ဒီလိုပဲ ခုကိစ္စမှာ သူများကို ကျေးဇူးတင်တတ်တာထက် လိုရာဆွဲပြီး ဆော်ချင်တဲ့ စိတ်က ဦးဆောင်နေတယ်လို့ မြင်မိတယ်။"))) <<< အဲဒီ တချက်ကိုလဲ အထူးပြု ပြောချင်မိပြန်တယ်။
မငယ်နိုင်ကြည့်ရတာ ရီတာကို အစာမကြေသလိုပဲ။ ငြိထားကြသေးလား။ သိတောင် မသိလိုက်ဘူး။
funny comments above :D
အကုန်လုံး လိုက်ဖတ်ကြည့်တော့ မုန့်လုံးစက္ကူကပ် နေသလိုပါပဲ။ သူများကို နှိပ်ကွပ်ချင်စိတ်ပိုပြီးတော့ ဆိုလိုရင်းတွေကို သဘောမပေါက်ကြဘူး ထင်တယ်။ (မြင်ရတဲ့ အတိုင်းပြောတာပါ။)
ကိုညီလင်းဆက် ၊ မရီတာ ၊ ကိုပေါ တို့က ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဆွေးနွေးထားတာပဲ။ သူတို့ပြောထားတာကို ကျနော်နားလည်တာကတော့ ကျေးဇူးမတင်ရဘူးလို့ မဆိုလိုပါဘူး။ အားလုံးကိုယ့်တာဝန် ကိုယ်ကျေကြဖို့သာလိုတယ်။ (စာနယ်ဇင်းတွေက ကျေးဇူးတွေစကားထဲ ထည့်ပြောတာက စတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ တကယ်ဆို သူ့အလုပ်သူလုပ် ရမှာပါပဲ။)
အဲဒီမှာ တချို့က မဆိုင်တဲ့ မိသားစုကိစ္စတွေရော အလှူတွေရော နိုင်ငံရေးတွေရော ဘာတွေမှန်းမသိ အစဆွဲထုတ်ပြီး လိုက်ငြင်းနေတယ်။ (ကွန်မန့်ရေးသူတွေက မငြင်းပါဘူး ဆိုပေမယ့် စာရေးသူက ဘယ်လောက်ရှင်းပြ ရှင်းပြ နားလည်အောင် မဖတ်ဘဲ ကိုယ်လိုရာ ပြောနေရင်တော့ ဒါ ငြင်းနေတာပါပဲ။) နာမည်ရ ဘလော့ဂါတွေမို့ အဆင့်ရှိရှိ ငြင်းကြတာကိုတော့ လေးစားမိတဲ့ အကြောင်း ပြောပါရစေ။
မရေးရ မနေနိုင်လို့ မန့်လိုက်ပါတယ်။ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အခုမှသဘောပေါက်တယ် ရှင်းနေတာတွေကိုရှုတ်အောင်လုပ်၊ ဗမာစာကိုဗမာနားမလည်အောင်ရေး၊ ဂွလိုက်ပြော၊ ဆရာကြီး/ဆရာမကြီးတွေရဲ့စာကိုလိုက်ဖဲ့၊ ဆူးလှည်းကြီးမောင်းပြီး နာမည်ကြီးအောင်လုပ်နေတာကိုး! မှားပါတယ်ဗျာ။ ခုတော့ ကျုပ်လဲ "ဟင်" သွားပြီ! တော်တော်သန်းရှာတဲ့သူတွေ....
ဒါဆို အရိုင်းဆန်သူကတော့ သန်းရှာတဲ့လူတွေကို ဝါသနာအရ လိုက်ရှာကြည့်သူ ဖြစ်ရမယ်
ပြောတတ်လိုက်တာ … စကားရည်လုပွဲမှာ ၀င်ပြိုင်ရင် မရီတာ နိုင်မှာ ကျိန်းသေတယ်။
အရိုင်းဆန်သူကို “သန်းရှာတဲ့လူတွေကို ဝါသနာအရ လိုက်ရှာကြည့်သူ” တဲ့လား။
ခုကိစ္စက ကျေးဇူးရှိတယ်၊ မရှိဘူး ပြောနေတာ မဟုတ်ပါဘူး။
ကျေးဇူးရှိတယ်လို့ ပြောနေတာကို မပေါက်ဘဲ မရှိဘူးလို့ ပြောနေတယ်ချည်း စွတ်ငြင်းနေလို့ ပြောနေရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
နိုက်တင်ဂေးကိစ္စ ဒီ့ထက်ရှင်းအောင်လဲ ပြောလို့မရတော့ဘူး။ သူ့ကို သူလုပ်ချင်တာလုပ်နေလို့ ကျန်တဲ့လူတွေက ကျေးဇူးမတင်ရဘူး၊ သူ နစ်နာတယ် မထင်ရဘူး ပြောနေတာ မဟုတ်ဘူး။ သူပြုစုခဲ့တဲ့ လူနာတွေ ပေါ်မှာ သူကျေးဇူးရှိတယ်။ ဘေးအမြင်အရ သူ စွန့်လွှတ်ခဲ့တယ် ဆိုတာ အတိအလင်းပါပြီး ဖြစ်တယ်။
အဲဒါကို ဘယ်လိုကနေ ဘယ်လို သူ့ကျေးဇူးမရှိပါဘူး၊ သူဘာသာ အားလို့လုပ်နေတာပါ လို့ အဓိပ္ပါယ်ပေါက်အောင်ဆွဲဖတ်လိုက်တာလဲဆိုတာ ဉာဏ်ကို မမီတော့ဘူး။
အားနေရင်တော့ တခေါက်လောက် ပြန်ဖတ်ပေးပါလား။ အနူးအညွတ်တောင်းဆိုတာပါ။
ပြန်ဖတ်ပေးခဲ့မယ်ဆိုရင် ခုကိစ္စမှာ NK အနေနဲ့ လုပ်ချင်လို့ လုပ်တာ မဟုတ်ဘဲ ကိုယ်က ပြန်ဖတ်စေချင်လို့ တောင်းဆိုလို့ ဖတ်ရတာဆိုတော့ ကိုယ့်အနေနဲ့ အနူးအညွတ် ကျေးဇူးတင်ဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲလို ရေးရင် ငေါ့သလိုများ ဖြစ်သွားမလားတော့ မသိဘူး။ စိတ်ထဲမှာတော့ နိုက်တင်ဂေးကိစ္စ ပြန်ဖတ်စေချင်တာ အမှန်ပဲ။
မရီတာ ခင်ဗျား (ကိုပေါ ဘလော့ မှာ မရီတာ ဆီ ကွန်မန့်
ရေးရတာ အားနာပါတယ် ကိုပေါရေ..ဒီမှာရေးလက်စဖြစ်
နေလို့ပါ)မရီတာပြောတာမှန်ပါတယ် မနေ့က ကျွန်တော်ရေး
လိုက်တဲ့ကွန်မန့် မှာ နိုက်တင်ဂေး အနေနဲ့ အနာတွေ၊ပြည်
တွေကိုရွံ မှာပဲ ဆိုတာ ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ခံစားမှု နဲ့(လူအများ
စုမှာရှိတဲ့ခံစားမှု့ နဲ့)နှိုင်းယှဉ် ပြီးရေးလိုက်တာပါ။
နိုက်တင်ဂေး ရဲ့ စိတ်ခံစားမှု ကို သူပဲ သိနိုင်မှာပါ၊
တဲ့ လူတစ်ယောက် ကို သာမာန်လူလို သွားတွေးလိုက်မိတာ
ပါ။ဒါနဲ့ ပို့စ်တွေ၊ကွန်မန့်တွေကို တစ်ခေါက်ပြန်ဖတ် ရင်းနဲ့
တွေးမိလိုက်တာက ကျွန်တော် လမ်းချော်သွားတယ် ဆိုတာပါ။တကယ်က ပရဟိတလုပ်နေတဲ့သူတွေသူ့
ဘာသာ ဘယ်လိုတွေးတွေး၊ဘေးကလူတွေ ဘယ်လို
တို့အဓိကဆွေးနွေးသင့်တာက တချို့လူတွေက သူတို့ရဲ့
"အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း" ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်မှာပဲ
ထားသင့်တဲ့ သူတို့ရဲ့အလုပ်ကို "ကျေးဇူး"ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်
အောက်ကိုအတင်ဆွဲသွင်း လိုက်တဲ့ကိစ္စ လို့တွေးမိလိုက်
တာပါ။ပိုပြီးဆိုးကုန်တာက ကျေးဇူးဆိုတာမရှိဘူးလို့ တမျိုးတွေးမိကြတဲ့လူကတမျိုးတွေးမိလိုက်ကြတာပါပဲ။
(စကားမစပ် lun lunn ပြောသွားတဲ့ မရီတာ စကားရည်
လုပွဲဝင်ပြိုင်ရင် နိုင်မှာကျိန်းသေတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်
လည်းသဘောတူတယ်ခင်ဗျ။ဟီးနောက်တာနော်။ကို့ ကို မထိတထိရိတဲ့စကားတွေကိုထိထိမိမိ ပြန်ပြောတတ်
ကို Mg Lay....
ရပါတယ်။ အားမနာပါနဲ့။ ကျနော်ကတောင် ကျေးဇူးတင်ရဦးမှာပါ။ ရီတာ့ပို့စ်နဲ့ ကွန်မင့်တွေကြောင့် ကျနော့်ဆီမှာ Hit တွေ တော်တော်တက်တယ်။ ကျနော့်အစွမ်းကြောင့်ဆို ဒီလောက် လူမလာဘူး။ ထက်ထက်ပြီးရင် ရီတာပို့စ်က ကွန်မင့်အတက်ဆုံးပဲ။ ရီတာရဲ့ အားထုတ်မှုအပေါ်မှာ ခေါင်းပုံဖြတ်ရာ ရောက်နေမလားတော့ မသိဘူးဗျိုး။ သူ့ကိုလည်း တကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကိုမောင်လေး ကိုယ့်သဘောထားကို ပွင့်ပွင်းလင်းလင်း ရိုးရိုးရှင်းရှင်း ပြောသွားတာလည်း သဘောကျမိပါတယ်။
ထက်ထက်ကို ယှဉ်နိုင်တယ်ဆိုတာ ခုမှ သိရတာ အသိနောက်ကျလိုက်တာ။
ဆောရီး... ရိုက်တာလောကြီးသွားလို့။ ထက်ထက်ပို့စ်ပြီးရင် ရီတာပို့စ် တင်တဲ့နေ့မှာ လူဝင်အများဆုံး၊ hit အတက်ဆုံးလို့ ရေးတာ။ ကွန်မင့်ကတော့ ရှေးတုန်းက ဂျောက်ဂျက်ပို့စ်တွေမှာ ပိုများတယ်။ လာဆဲတဲ့လူ များလို့။း-)
First of all, I dont know who is that chick Rita. But she won my respect, and cheers for Ko Paw for
compiling all of her comments in
First of all, I will explain why do I dont like Jar Nel Kyaw. I read
that book 'Thu Lo Lu' when I was
a teen decades ago. I think that book is just Jar Nel Kyaw Ma Ma Lay's shameless attempt to boost her husband stature as if her hubby was solely responsible for Burmese pre-Indepedencence attempt.
I never think he is an exceptional man butabitter man who cannot go to Univ of London. Fast forward, when I started reading the journal 'The Economist', sorry to say this but the fact is that I started to think that while the author is shameless, her character (her hubby) is pathetic. He isapoor guy who was just translating and plagarizing the Economist magazine.
Make no mistake, I havealot of respects for those translators and those who share their knowledge. But I think JNK Ma Ma Lay wentabit overboard, she wants the reader to worship her husband.
Try another life old girl.
Next, I do feel loathesome for anti-government pygamies who claim they have done this and that for country. To them the same, try another day, try to another fool.
Good news for you is thatasucker is born every minutes so you can findasucker and ask them to thank you. But not us.
I have browsed some ex-ABSDF or ABCDE guys' or girls' blogs. But
I stopped browsing all together
as nothing good there. They are
as worthless as those KyantPhont
suckers' pathetic blogs. Sorry
suckers, it is your time to get
the lift in your little asses.
I dont like you brownies either!
Dont even think that I am your
side. I am not like you guys who
will swallow Than Shwe's balls
(does he have balls by the way?).
Ok what I dont like about ex-ABCDE
or sorry ABSDF or ABSF whatever is
that they are full of craps.
'After leaving the battles, I have started to forget how to do field strip M-16 rifle.'
My buddy told me over the beer that
for someone who is experienced with small arms that include rifes
and pistols for more than 10 year.
He think, I quote
'Field stripping is alike ridingabicycle, or swimming, once you can swim you can swim always, so that isapiece of crap from those shameless ABCDE or XYZ suckers!'
So weed headed morons, if you blog, make sure you google first.
Dont bull shit, not all Burmese are fools like your mother who
beded with your father to bring you to the world.
(June 11, 2010 9:52 PM) မှာ ရေးတဲ့ Anonymous,
ကိုယ့်အနေနဲ့တော့ ဂျာနယ်ကျော်စုံတွဲနဲ့ ပတ်သတ်လို့ အဲလောက်ထိ စုံစုံစေ့စေ့ မသိပါဘူး။ အဲဒီ ဝတ္ထုကို (အမှန်က အတ္ထုပ္ပတ္တိပုံစံ) ဝတ္ထုအနေနဲ့ပဲ ကြည့်ခဲ့တာပါ။
ကျွန်မအနေနဲ့ ဇာတ်ကောင်ရဲ့ ကာရိုက်တာကို မနှစ်သက်ခဲ့တာသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မက တုံးဆိုတိုက်- ကျားဆိုကိုက် ဆိုတဲ့ ကာရိုက်တာမျိုးကို စွဲလမ်းတတ်တော့ အလွန်အကျွံ ရှက်တတ်၊ အလွန်အကျွံ အားနာတတ်တဲ့ စရိုက်မျိုးကို မခံစားတတ်ဘူး ဖြစ်ခဲ့တာပါပဲ။ ဒါပါပဲ။
ဂျာနယ်ကျော်မမလေးရဲ့ အရေးအသားနဲ့လည်း မပတ်သတ်၊ ဦးချစ်မောင်ရဲ့ အရည်အချင်းနဲ့လည်း မပတ်သတ်ဘဲ ဇာတ်ကောင်စရိုက် သက်သက်ကို ခံစားလို့မရတာကြောင့် မနှစ်သက် မစွဲလမ်းခဲ့တာပါပဲ။
If you read that book again with this perspective, you will get
I do feel pity for U Chit Maung.
I am sure he isawell read man,
and what he lacked in formal education, he has compensated by
devouring all the books. However,
there were guys parallel to him who
were as good as him, to nameafew,
Ko Aung San (younger than him), U Tin Htut (who went to Cambridge Univ), Dr. Ba Maw and Dr. Ba Han who earned PhDs from Univ of Paris,
BG Maung Maung and BG Aung Gyi (who worked as PSOs of Gen. Aung San), Bo LetYa, Ko Ba Hein, and more. I think you can even put Shwe U Daung although he was apolitical), Min Thu Won, ZawGyi, our polymath Dee Doke U Ba Cho, Than Khin Mya, Tha Khin Chit and Tha Khin Zin. Even though I dont like Tha Khin Soe and Tha Khin Than Htun they contributed more than U Chit Maung. I understand old
JNK Ma Ma Lay for her to raise the profile of her late husband. But I had friends who emulated U Chit Maung to the extent that he becomeagay for not being able to pee while he hears girls. He isadoctor and I hope he will not recognize me if he happens to read this. Cheers!
June 11, 2010 10:37 PM, Anonymous
ကိုယ် ငယ်ငယ်တည်းက စာရေးဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ် စာနယ်ဇင်းကိုမှတော့ မပို့ဖူး၊ မပါဖူးပါဘူး။ ဝါသနာအရ ရေးဖြစ်နေခဲ့တာပါ။ ပြီးတော့ လူတွေကို စိတ်ဝင်စားပါတယ်။
စာရေးဖြစ်တာနဲ့ လူတွေရဲ့ စရိုက်ကို အာရုံစိုက် စိတ်ဝင်စားမှုက အပြန်အလှန် မှီပြီး ပွားများလာပါတယ်။ အဲဒီအခါ (အနည်းဆုံးတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်) လူတွေရဲ့ စရိုက်သဘာဝကို ရိပ်စားမိတတ်လေ့ ရှိတယ်လို့ ယူဆမိပါတယ်။
သူလိုလူ ကို ဖတ်တော့ တကယ့်ကို 'စာ' (တကယ်က အတ္ထုပ္ပတ္တိ ဖြစ်နေတော့ ဝတ္ထုဆိုတာထက် စာ လို့ ပြောရင် ပိုကောင်းမယ်ထင်လို့) အနေနဲ့ ဖတ်ခဲ့တာပါပဲ။ အသက် 22/3 လောက်မှာ ဖတ်ဖြစ်တယ်။ စာ အတော်ရေးကျင့်ရနေပြီး၊ လူ့စရိုက်သဘာဝကို အတော် စိတ်ဝင်တစားရှိနေခဲ့ပြီ။ အဲဒီအခါမှာ ဒီကာရိုက်တာက တခုခု ချော် နေသလို၊ လွဲနေသလို ခံစားရပါတယ်။ ကိုယ် professional စာရေးဆရာ မဟုတ်ပေမဲ့ အဲဒီချိန်မှာ ကိုယ့်ဘာသာ စာရေးဖြစ်နေခဲ့ပြီဖြစ်တော့ စာရေးနည်း၊ ကာရိုက်တာ ဆိုတာတွေကို စာဖတ်သူ သက်သက်တုန်းကထက် ပိုကြည့်မိသွားတာကြောင့်ပါပဲ။ ဒါပါပဲ။ ဒီလောက်ပါပဲ။
ခုနေပြန်ဖတ်လည်း ဒီလိုပဲ ခံစားရမှာပါပဲ။
ဒါပေမဲ့ ဦးချစ်မောင်ရဲ့ အတန်းပညာအရည်အချင်းကို ထည့်ပြောတာကတော့ သိပ်မဆိုင်ဘူး ထင်ပါတယ်။ ဦးချစ်မောင်က လန်ဒန် ယူနီဗာစတီ မသွားနိုင်ခဲ့ဘူး ဆိုတဲ့ အချက်ကတော့ စွန်းထွက်သွားတဲ့ အကြောင်းပါပဲ။
နိုင်ငံကြီးတစ်နိုင်ငံက တက္ကသိုလ် တစ်ခုခုကို တက်ဖို့ အရည်အချင်းမီခြင်း၊ မမီခြင်းနဲ့ လူတစ်ယောက်ကို အထင်ကြီးဖို့၊ အထင်သေးဖို့၊ နှစ်သက်ဖို့၊ မနှစ်သက်ဖို့ ကိုယ်ကတော့ ဆုံးဖြတ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
Well that is what the author claimed that her husband wanted to do in his life. I think he wanted to go LSE.
"ထက်ထက်ပို့စ်ပြီးရင် ရီတာပို့စ် တင်တဲ့နေ့မှာ လူဝင်အများဆုံး၊ hit အတက်ဆုံး"
သူလဲ ဘလောက်လောကမှာ မင်းသမီးတယောက်လေ၊ ကိုပေါ ခေါင်းစင်တပ်တာ နည်းနည်းလိုသွားလို့ ထင်တယ်.. “နှစ်သက်မိသော သူ့အမြင်” အစား "နှစ်သက်မိသော ရီတာကို အမြင်" လို့ သူ့နာမယ်သုံးပြီးသာတင် ထက်ထက် ထက်တောင် များချင် များမယ်၊ နောက်များမှကြုံရင် စမ်းကြည့်ပေါ့..lolz..
Whatever people criticize, she is NOT afraid to stand her own points. Admiring that attitude and spirit.
" Whatever people criticize, she is NOT afraid to stand her own points. Admiring that attitude and spirit. "
ဗာမာလို တိုက်ရိုက်ပြန်ရင်တော့ " စွာ " တယ်လို. ပြောရမလား မသိဘူး ၊
((" Whatever people criticize, she is NOT afraid to stand her own points. Admiring that attitude and spirit. "))
သဘောတရားနဲ့ ကိုကိုဆန် ရေးတဲ့
((ဗာမာလို တိုက်ရိုက်ပြန်ရင်တော့ " စွာ " တယ်လို့ ပြောရမလား မသိဘူး။))
သဘောတရားဟာ လုံးဝ ဆန့်ကျင်ဘက်ပါပဲ။
လူတစ်ယောက်က မိမိခံယူချက်ကို သူများပြောတိုင်း မတွေဝေပဲ မယိမ်းမယိုင် တသတ်မတ်တည်းရှိလို့ လေးစားသဘောကျတာကို “စွာ” တာနဲ့ ခိုင်းနှိုင်း ဘာသာပြန်တာဟာ ဘယ်လိုမှ မဆီလျှော်ပါဘူး။ အဆိုးမြင်တဲ့သဘော သက်ရောက်ပါတယ်။
အမြင်မတော်တာတွေ့လို့ ၀င်ပြောခြင်းပါ။ ကိုကိုဆန်ကိုလည်း မသိသလို မရီတာကိုလည်း မသိပါ။
ကိုပေါအိမ်သွားလည်လို့ ကော်ဖီလေး မုန့်လေးများ ကျွေးလို့စားပီးရင် " ကျေးဇူး " လို့တော့ သွားမပြောမိစေနဲ့ဗျို့... ကျေးဇူးတရားနာနေရလိမ့်မယ်...။
တရားနာနေတဲ့ပရိတ်သတ်ကြီးလဲ ငိုက်နေကြလို့ တုတ်တုတ်တောင် မလှုပ်ကြတော့ဘူး...။
ကိုယ့် စွာ တယ်ပြောရင် စိတ်ဆိုးစရာ မထင်တာတော့ အမှန်ပါပဲ။ သြော် သူ မှန်တာ ပြောနေတယ် လို့သာ တွေးမိပါတယ်။ တကယ်လဲ ကိုယ်က စွာ တာကိုး။ စွာ တာမှ တချို့နေရာတွေမှာ 'လိုအပ်တယ်ထင်လို့ကို စွာတယ်' ဆိုတဲ့လူမျိုး။
ဒါပေမဲ့ ခု post မှာ comment ရေးမိသမျှတော့ စွာ ထားတာ မရှိသေးဘူးလို့ပဲ ထင်မိတယ်။ သိပ်တော့ မသေချာ။
မရီတာ ရဲ. ရဲရင့် တဲ့ ခံယူချက်ကို လေးစားမိပါတယ်၊
မရီတာရေ ပါတီထောင် ၊ ရွေးကောက်ပွဲဝင် Lun Lunn ရဲ. မဲ တစ်မဲ တော့ ရပြီးသား ၊
ကိုပေါက ဒီလို ကွန်.မန်.လုပ်ထားပါတယ်၊
"အထူးသဖြင့် ရီတာတို့ ညီလင်းဆက်တို့နဲ့ဆို ဘလော့ဂ်ပေါ်ကလွဲလို့ အီးမေးလ်လည်း တခါမှ မဆက်သွယ်ဘူး၊ လူချင်းလည်း တခါမှ မတွေ့ဖူးသေးဘူးဗျ။ ဒီလိုပဲ သူတို့ စာတွေကဆင့်သာ တချို့ အယူအဆတွေ၊ အမြင်တွေကို နှစ်သက်တာ၊ ထပ်တူကျတာတွေ ဖြစ်လာတာပါ။ "
ကိုပေါ က ကျွန်တော်ကို မသိပေမဲ့ ကျွန်တော် ကိုပေါ ကို အရင် Penisula
(၄) ထပ်က လမ်းပြစာကြည့်တိုက်မှာ တစ်ခါ ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ. မွေးနေ.ကို မနှစ်က china town နားက park တစ်ခုမှာ ကျင်းပစဉ်က မြင်ဖူးပါတယ်၊ - park နာမည် မမှတ်မိတော့ပါ - (ကိုပေါ ရဲ. profile က ပန်းချီပုံနဲ. ဆက်စပ်ပြီး သိခဲ့ရတာပါ) ၊ ကျွန်တော် က ကိုပေါ ရဲ.
ဥပဓိရုပ်ကို မဝေဖန်ချင်ပေမဲ့ ကျွန်တော်တို. ငယ်ငယ်က ခေတ်စားခဲ့တဲ့ စကားလေး တစ်ခုကို quote လုပ်ချင်ပါတယ် ၊
" ကိုကျော် (ကိုပေါ) က လူတိုင်း ကို မသိနိုင်ပေမဲ့ လူတိုင်း က ကိုကျော် (ကိုပေါ) ကို သိပါတယ် "
ကိုကျော်က လူတိုင်းကို မသိပေမယ့်.... ဆိုတဲ့ စကားလေးအတွက် ကျေးဇူးပါ။
ကျနော်သုံးလေ့ရှိတာက မူလ ဆိုရိုးစကားဖြစ်တဲ့ “ဖိုးစိန်ကြီးက လူတိုင်းကို မသိပေမယ့် လူတိုင်းကတော့ ဖိုးစိန်ကြီးကို သိပါတယ်” လို့ ပြောလေ့ရှိတယ်။ နာမည်ကျော် ဇာတ်မင်းသားကြီး ဦးဖိုးစိန်ကို ရည်ညွန်းချင်တာပါ။
ဒါပေမယ့် ဓါတ်သိဘော်ဒါတွေကတော့ “အေးလကွာ၊ မျောက်ဖိုးစိန်တော့ လူတိုင်းသိကြတာပေါ့” လို့ နှိပ်ကွပ်တတ်ပါတယ်။
ကိုပေါ ရဲ. ကွန်.မန်. ကိုဖတ်ပြီး ပြုံးမိပါတယ် ၊
ကျွန်တော်က ဘလော့ဂ်တွေမှာ ၀င်ရေးခဲပါတယ်။
ရေးရင်လည်း အကြောင်းအရာပေါ်မှာပဲ အခြေခံပြီး ကိုယ့်အယူအဆကို ရေးလေ့ရှိပါတယ်။
အခု ကိုကိုဆန် ရေးတဲ့ကွန်မန့်ကိုလည်း ဘလော့ဂ်ပေါ်မှာ ဆုံတွေ့ကြတဲ့ သူချင်း ခင်မင်မှုနဲ့ မန့်သွားတယ်လို့ မှတ်ယူလိုက်ပါတယ်။
နောင်လည်း အကျိုးရှိမယ့် အကြောင်းအရာတွေကို ခင်မင်ရင်းနှီးစွာ ဆွေးနွေးဖလှယ်ကြတာပေါ့။
စိတ္တသုခ၊ ကာယသုခနှစ်ဖြာနဲ့ ပြည့်စုံနိုင်ပါစေ။
Lun Lunn သို.
ကျေဇူးတင်ပါတယ်၊ ကျန်းမာရွှင်လန်းပါစေ ၊
မရီတာ နဲ့ ဒေါ်ငယ်နိုင် အပေါ်ကတစ်ယောက်ပြောသလို
စလုံးမှာနေပြီး စလုံးစတိုင် ပေါက်ပေါက်ရှာရှာ ကပ်သီးကပ်သပ် ညစ်ပုတ်ကပ်ကျယ် အကျင့်တွေ ပါနေပြီထင်တယ် အလုပ်ထဲမှာ စလုံးတွေနဲ့ပြိုင်ငြင်းနိုင်ရင်တော့ ကောင်းသားပဲ
ကိုပေါရေ ကျွန်မဘလော့ဂ်ကို လာလည်ပြီး အကျိုးအကြောင်း ဆီလျော်တာတွေ လာဆွေးနွေးလို့ အထူးပဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်မ စာမေးပွဲပြီးလို့ Mid-Semester ကျောင်းပိတ်ချိန်ဖြစ်ပေမဲ့ တခြားကိစ္စတွေနဲ့ အချိန်မရလို့ နောက်ပိုင်း ဘလော့ဂ်လည်း သိပ်မလည်ဖြစ်ဘဲ ပို့စ်လည်း အတင်တာ သိပ်ကျဲနေတယ်။ ကိုပေါပို့စ်ကို တခေါက်ပြန်လာဖတ်တော့ ၀ဋ်ဆိုတာ နောက်ဘ၀မကူးဘူး ဒီဘ၀မှာတောင်အကြာကြီးမဟုတ်ဘဲ ချက်ချင်းလက်ငင်း လည်တယ်ဆိုတာ ချက်ချင်းကို သဘောပေါက်သွားတယ်။ Rita ရေးတဲ့ မှတ်ချက် အကြောင်းပြန်ချက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကိုပေါပြန်တင်ထားတာကို Yita ရဲ့ နဂိုပို့စ် (မှတ်ချက် အကြောင်းပြန်ချက်မဟုတ်) ထဲက အချက်အလက်တွေပဲ ခေါင်းထဲဝင်ပြီး ရောနေလို့ အကြောင်းပြန်ချက်ထဲမှာ ရေးထားတဲ့ လိုရင်းကို သဘောမပေါက်ဘဲ စိတ်ထဲမှာ ထင်နေတဲ့အတိုင်း သွားရေးထားတဲ့ မှတ်ချက်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရှင်းလေရှုပ်လေ ဖြစ်ခဲ့တာကို ကိုပေါတို့ Rita တို့ ဘယ်လိုခံရခက်မယ်ဆိုတာ ကျွန်မ အခုမှ ကောင်းကောင်း သဘောပေါက်သွားပါတယ်။ အဲဒီအတွက် ကျွန်မပြန်ခံရတဲ့ ၀ဋ်က ကိုပေါတို့ကို ကျေးဇူးတရားကို နားမလည်တဲ့ သူတွေအဖြစ် မြင်ပြီးစွပ်စွဲခဲ့တာထက် အခုကျွန်မ ပြန်ဝဋ်လည်ပြီး သာသနာဖျက်၊ မိစ္ဆာာဓိဋ္ဌိအဆင့်ထိ ရောက်အောင် ပြန်အစွပ်အစွဲခံရတာက အဆရာထောင်မက ပြင်းထန်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူများစွပ်စွဲသလို ကိုယ်မဟုတ်တာ ကိုယ်သိလို့ လိပ်ပြာသန့်ပါတယ်။ ကိုပေါတို့တုန်းကလည်း ဒီလိုပဲ ခံယူလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်မ ထင်တယ်။ တကယ်တော့ ကျွန်မက ကိုပေါပြန်တင်တဲ့ပို့စ်ထက် Rita ရဲ့မူလပို့စ်ကပဲ ခေါင်းထဲမှာနေရာယူနေလို့ ဖြစ်ခဲ့တာ အမှန်ပါ။ ကျွန်မကြောင့် စိတ်အနှောက်အယှက် ဖြစ်ရတာတွေ အားလုံးအတွက် ကိုပေါနဲ့ Rita ကို ကျွန်မတောင်းပန်ပါတယ်။